အာဏာရှငျကို ဝိုငျးဝနျးတျောလှနျနကွေတဲ့ လူငယျတှကေို “လမျးပြောကျနပွေီလား”လို့ မေးလာတဲ့သူတှကေို ထိထိမိမိ ပွနျလညျခပြေလိုကျတဲ့ ဟဲဗီးဖွိုး… – Askstyle
အာဏာရှငျကို ဝိုငျးဝနျးတျောလှနျနကွေတဲ့ လူငယျတှကေို “လမျးပြောကျနပွေီလား”လို့ မေးလာတဲ့သူတှကေို ထိထိမိမိ ပွနျလညျခပြေလိုကျတဲ့ ဟဲဗီးဖွိုး…
အာဏာရှင်ကို ဝိုင်းဝန်းတော်လှန်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေကို “လမ်းပျောက်နေပြီလား”လို့ မေးလာတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိ ပြန်လည်ချေပလိုက်တဲ့ ဟဲဗီးဖြိုး…
လက်ရှိအရေးအခင်းမှာ လူငယ်အများစုဟာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေ ကြတာပါ။ လူငယ်တွေဟာ အမြင်သစ်အတွေးသစ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေမတွေးလိုက်နိုင်တဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး အကွက်ကျကျစီစဉ်တတ်ကြသူတွေပါ။ လေ့လာမှုအားကောင်းတာရယ် အသစ်အဆန်းတွေလေ့လာစရာပေါတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဘက်ပေါင်းစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံက ကူညီပေးကြတဲ့ Gen X,Y,Z တို့ရဲ့အားအပြင် အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြတဲ့ CDM ဟာလည်း ဒီအရေးတော်ပုံမှာ အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်
လူငယ်အများစုဟာ မတရားသဖြင့် သတ်ဖြတ်ခံ၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး လူမသေသော်လည်း ဘဝသေသွားတဲ့အထိကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီး အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေကြတာပါ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းချီတက်နေပြီး ရင်တွင်းဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ကြပါတယ်။
တိုးတက်ရမယ့် အနာဂတ်တွေအားလုံး မှောင်အတိကျသွားတာမျိုး ဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ကြပါဘူး။ အမှောင်ခေတ်ကို ကျော်ဖြတ်လာတဲ့သူတွေဟာ အလင်းပြပြလေးမြင်နေရချိန်မှ အမှောင်ထဲပြန်မရောက်ချင်ကြသူတွေချည်း ပါပဲ။ လက်ရှိအချိန်ထိ တော်လှန်ရေးတွေလုပ်နေကြတာဟာ ဒီအရေးတော်ပုံအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပါ။
လူငယ်တွေကိုလမ်းပျောက်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးကြသူတွေကို ” မင်းတို့ လူငယ်တွေ လမ်းပျောက်နေတာလား ? ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ လမ်းဖောက်နေတာပါ… ” ဆိုပြီး ဟဲဗီးဖြိုးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်တိုင်းဟာ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေကြတဲ့အချိန်မှာ လူကြီးတွေဟာလည်း လူငယ်တွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တွေ တူညီနေပြီဆိုပြီး စုပေါင်းအားနဲ့ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
လကျရှိအရေးအခငျးမှာ လူငယျအမြားစုဟာ လမျးပျေါထှကျပွီး အာဏာရှငျကိုတျောလှနျနေ ကွတာပါ။ လူငယျတှဟော အမွငျသဈအတှေးသဈတှနေဲ့ လူကွီးတှမေတှေးလိုကျနိုငျတဲ့ ထောငျ့ပေါငျးစုံကနေ စဉျးစားတှေးချေါပွီး အကှကျကကြစြီစဉျတတျကွသူတှပေါ။ လလေ့ာမှုအားကောငျးတာရယျ အသဈအဆနျးတှလေလေ့ာစရာပေါတဲ့ခတျေကွီးမှာ ဘကျပေါငျးစုံ ထောငျ့ပေါငျးစုံက ကူညီပေးကွတဲ့ Gen X,Y,Z တို့ရဲ့အားအပွငျ အာဏာရှငျကို ဆနျ့ကငျြကွတဲ့ CDM ဟာလညျး ဒီအရေးတျောပုံမှာ အရေးကွီးတဲ့ကဏ်ဍတဈခုက ပါဝငျခဲ့ပါတယျ
လူငယျအမြားစုဟာ မတရားသဖွငျ့ သတျဖွတျခံ၊ ဖမျးဆီးနှိပျစကျခံခဲ့ရပွီး လူမသသေျောလညျး ဘဝသသှေားတဲ့အထိကို စှနျ့လှတျအနဈနာခံပွီး အာဏာရှငျကိုတျောလှနျနကွေတာပါ။ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ သပိတျစဈကွောငျးတှလေညျးခြီတကျနပွေီး ရငျတှငျးဆန်ဒကို ဖျောထုတျကွပါတယျ။
တိုးတကျရမယျ့ အနာဂတျတှအေားလုံး မှောငျအတိကသြှားတာမြိုး ဘယျသူမှလကျမခံနိုငျကွပါဘူး။ အမှောငျခတျေကို ကြျောဖွတျလာတဲ့သူတှဟော အလငျးပွပွလေးမွငျနရေခြိနျမှ အမှောငျထဲပွနျမရောကျခငျြကွသူတှခေညျြး ပါပဲ။ လကျရှိအခြိနျထိ တျောလှနျရေးတှလေုပျနကွေတာဟာ ဒီအရေးတျောပုံအောငျမွငျမယျဆိုတဲ့ ယုံကွညျခကျြတဈခုတညျးနဲ့ပါ။
လူငယျတှကေိုလမျးပြောကျနပွေီလားဆိုတဲ့မေးခှနျးမေးကွသူတှကေို ” မငျးတို့ လူငယျတှေ လမျးပြောကျနတောလား ? ကြှနျတျောတို့ လူငယျတှေ လမျးဖောကျနတောပါ… ” ဆိုပွီး ဟဲဗီးဖွိုးက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျကတဆငျ့ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ လူငယျတိုငျးဟာ ခှနျအားအပွညျ့နဲ့ အာဏာရှငျကို တျောလှနျနကွေတဲ့အခြိနျမှာ လူကွီးတှဟောလညျး လူငယျတှအေတှကျ ခှနျအားဖွဈပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။ ရညျရှယျခကျြပနျးတိုငျတှေ တူညီနပွေီဆိုပွီး စုပေါငျးအားနဲ့ အာဏာရှငျကိုတျောလှနျနိုငျမှာ အသအေခြာပါပဲ။